पार्टीकाे स्थायी समिति बैठकमा किन गएनन् ओली ? « Sansar News
पार्टीकाे स्थायी समिति बैठकमा किन गएनन् ओली ?
२१ मंसिर २०७७, आईतवार १४:३९
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति बिनै सुरु भएको छ । बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा केहि बेर अघिदेखि सुरु भएको हाे ।
बैठकमा पार्टीका दुवै अध्यक्षले पेश गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
गत कात्तिक २६ को सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए भने मंसिर १३ मा बसेको सचिवालय बैठक अर्का अध्यक्ष ओलीले ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जसमा एकले अर्कोलाई कडा आलोचना गरिएको छ ।
किन गएनन् ओली ?
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाका अनुसार ओलीको अनुपस्थिति राजनीतिक कारण र स्वास्थ्य प्रोटोकलको कारण हो । ‘स्थायी समितिको बैठकमा एजेण्डा, प्रस्ताव र सहमती केहि छैन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ज्यूले राख्नुभएको थियो, तैपनी उहाँ जाने कि भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो तर, त्यहाँ कोभिड–१९ अनुसारको स्वास्थ्य प्रोटोकल, डिस्टेन्स मेन्टेन्टलगायतका बैठक हल त्यस ढंगको व्यवस्थित नभएको रिपोर्ट आएसँगै उहाँ नजानुभएको हो’, संसार न्यूजसँगको कुराकानीमा उनले भने ।
यसअघि शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक राख्नुको औचित्य नरहेको बताएका थिए । उनले बैठक बोलाउने विषयमा पनि सहमती दिएका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली बैठक स्थलमा नजानुको कारण सुरक्षा चुनौति भने नभएको बताइएको छ । यसअघि चर्चा गरिएको विषय गलत भएको सल्लाहकार थापाले बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाको कारण पार्टी कार्यालय जाँदिन भन्नुभएको छैन्, अरु कसैले भनेका होलान्, उनीहरुले किन भने ? उनीहरुले जान्ने कुरा हो’, थापाले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री आजको बैठकमा पनि राजनीतिक कारण र स्वास्थ्य प्रोटोकलको कारणले नजानु भएको हो ।’